A.lahi – Page 4
RA,IISAL WASAARE KHEYRE OO XARIGA KA JARAY MASHRUUCWAYN OO AY MAALGALINAYSO QADAR
(RO) Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa maanta daah-furay bilaabashada mashruuc lagu dhisayo waddooyinka xiriiriya Muqdisho, Afgooye iyo jowhar
Dowladad Federaalka Soomaaliya iyo shirkad laga leeyahay dalka Turkiga oo ku guuleysatay dhismaha waddooyinkan ayaa kala saxiixday heshiis ku aadan sidii loo dhisi lahaa wadooyinkan
Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa u mahadceliyay dowladda Qadar, wuxuuna sheegay in iftiin cusub u bilowday ganacsatada iyo beeraleyda labada Shabeelle.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, iyo Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen ayaa goob joog ka ahaa madasha heshiiska lagu kala saxiixday.
Dowladda Qadar ayaa maalgelineysa dhismaha waddooyinkan isku xira magaalooyinka Muqdisho, Afgooye iyo Jowhar oo ka kala tirsan gobolada Banaadir iyo labada Shabeelle.
Dhismaha wadooyinkan ayaa waxay muhiim u yihiin isku socodka gaadiidka dadweynaha iyo kuwa xamuulka qaada, kuwaasi oo dhibaato weyn ku qabay bur burka wadada.
XISBAYADA MUCAARADKA SOOMAALIYA OO TAAGEERAY GO AANKII AY SOOMALIYA UGU JAWAABTAY KENYA
RO) Xisbiyada mucaaradka ee soomaaliya ayaa si aan kala harlahayn taageero ugu muujiyay go aankii kama danbaysta ahaa ee ay dowlada soomaaliya ugu jawaabtay kenya,ta soo ka soo unkantay markii ay kenya soo eriday danjirihii soomaaliya mudane tarsan.
Qoraallo xisbiyada (UPD) iyo WADAJIR ayaa lagu sheegay inay taageerayaan go’aanka dowladda Federaalka ay ka bixisay hadalladii ka soo yeeray Kenya, kuwaasoo salka ku haya muranka badda ee labada dal u dhexeysa.
sidoo kale waxa ay xisbiyadu tilmaamin inay ahayd talaabo waxku oola muujinaysana in dalku kalsooni ka soo muuqatay
Guddoomiyaha xisiga WADAJIR, C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa xusay in xisbigiisu uu taageerayo hadalka dowladda Soomaaliya, isagoo sheegay inuu xisbigiisu ka shaqeynayo ilaalinta Madax-bannaanida iyo xudduudaha dhulka ee Soomaaliya.
“Xisbiga aan hoggaamiyo wuxuu ku garab-taagan yahay Dowladda Soomaaliya ilaalinta wadajirka, midnimada xuduudaha dhulka iyo madax-bannaanida Qaranka. Wuxuu xisbigu taageersan yahay xaqnimada dacwadda ay DFS u gudbisay maxkamadda caddaaladda adduunka,” ayuu yiri CC Warsame.
Dhanka Kale, Guddoomiyaha Xisbiga UPD, Xasan Sheekh Maxamuud oo horay madaxweyne uga soo noqday Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay inay xisbi ahaan ku taageerayaan dowladda dhexe jawaabtii ay ka bixisay hadalkii kasoo yeeray xukuumadda Kenya.
“Soomaaliya waxay xaq u leedahay ilaalinta, gacan-ku-haynta iyo sugnaanta xuduudaheeda iyo khayraadka ku jira. Waana lagama maarmaan ah in la muujiyo siyaasad deggen oo ku saleysan daris-wanaaggga dalalka jaarka ah iyo in lagula dhaqmo daris-wanaag iyadoo la eegayo xiriirka labada waddan ka dhexeeya,” ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa hadalkiisa ku daray in xiisadaha hadda taagan ee ku aaddan muranka badda la dajiyo lagana war-sugo go’aanka ay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ka gaarto dacwadda arrintan ku saabsan ee hortaalla.
Ugu dambeyn, Warbaahinta Dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay maanta laga sii daayay war ku saabsan xisbiyada mucaaradka ah ee dalka ka jira oo ay dowladdu hangool ku haysay, iyadoo xisbiyada mucaaradka ah ay dhankooda muujiyeen inay arrimaha masiiriga ah ku garab-taagan yihiin dowladda dhexe ee Soomaaliya oo aysan ka dhinac hadli doonin.
kala soco warar tafatiran raadonline.net
KOOX HUBAYSAN OO MUWAADIN SOOMAALI AH KU DISHAY KOONFUR AFRICA
18th February 2019 by A.lahi Leave a Comment
Dilka muwaadinkan Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka dhacay xaafada New Brighton magaalada Port Elizabeth Ee gobolka Eastern Cape
Allaha u naxariistee marxuumka ayaa lagu magacaabi jiray Yusuf Mohammed Ibrahim, waxaana la toogtay isagoo garigiisa ku jira.
Ciidamada Booliska ayaa soo gaaray goobta dilka uu ka dhacay kuwaasi oo goobta baaritaano ka sameeyay.
Dalka Koonfur Afrika waxaa ku soo badanaya dilka loo geysto muwaadiniinta Soomaaliyeed.
WASIIRKII HORE EE WASAARADA CAAFIMAADKA DOWLADA PUNTLAND OO MAANTA WAREEJIYEY XILKA
Wasiirkii hore ee Caafimaadkii Puntland Cabdinaasir Cismaan Cuuke ayaa maanta xilka ku wareejiyay Wasiirka cusub Jaamac Faarax Xasan.
Xil wareejinta oo ay goobjoog ka ahaayeen Guddi Madaxweyne Deni magacaabay, Agaasimayaasha Wasaaradda iyo shaqaalaha xarunta dhexe ayaa Wasiir Cuuke ku wareejiyay Wasiirka cusub lacag deyn ah oo ka maqan qaar kamid shaqaalaha.
Wasiirkii hore ee Caafimaadka Puntland Cabdinasir Cismaan Cuuke ayaa sheegay in lacag dhan 2.1 milyan doolar oo mushaar ah ka maqan yahay 785 shaqaale oo mushaari ka ah dowladda, sidoo kale Cuuke ayaa sheegay in khasnadda Wasaaradda ay ku jirto lacag mushaar ah oo dhan $781,045.08 iyo Sh. So. 117,847,000.
Cabdinaasir Cuuke ayaa faahfaahin dheer ka xibin, sababta lacagta intaas le’eg ay uga maqan tahay qaar kamid ah shaqaalihii Wasaaradiisa.
DOWLADA KENYA OO WAR KA SOO SAARTAY XALADA DANJIRIHII SOOMAALIYA EE KA YIMI XAGEEDA
KENYA Xog-hyaha joogtada ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya, Macharia Kamau ayaa sheegay inaysan Dowladda Kenya dalkeeda ka cayrin danjiraha Soomaaliya ee Kenya, Maxamud Ahmed Nuur (Tarsan), isagoo wararka ay warbaahintu baahisay ku tilmaamay kuwo marin-habaabin ah.
Macharia Kamau, ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay inaysan u yeereen safiirkooda Muqdisho, isla markaana aysan eryin safiirkii Soomaaliya, isagoo xusay in tan ay tahay mid uu ku saxayo wararkii saxaafaddu ay baahisay.
“Waxaan safiirkeena ugu yeernay la-tashi, waxaan safiirka Soomaaliya isna weydiisanay inuu tago dalkiisa si ay dhinacooda wada-hadal u yeeshaan, isla markaana aan u xallino khilaafka u dhexeeya labada dhinac,” ayuu Danjirhu ku yiri qoraalka uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka.
Sidoo kale, Xog-hayaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya, ayaa intaas ku darya inaysan Kenya ku faraxsanayn sida Dowladda Soomaaliya u iib-geysay xuduudka Badda Kenya ay leedahay, taasoo uu sheegay in weli dhulkaas uu muran ka taagan yahay.
“Kaydadka Shidaalku ku jiro ee ay beec-gaysay Dowladda Soomaaliua, gaar ahaan kuwa xuduud badeedka labada dal ku yaalla waa kuwo weli lagu muransan yahay, illaa dacwadoodu ay dhinac u dhacdana ma jirto dowlad isku dayi karta inay ka faa’iideysato khayraadka ku jira,” ayuu mar kale yiri Danjire Macharia Kamau.
Dhanka kale, Hadalka kasoo yeeray Xog-hayaha joogtada ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya ayaa kusoo beegmaya iyadoo Muqdisho uu dib ugu soo laabtay saakay danjiraha Soomaaliya ee Kenya, Maxamuud Axmed Nuur Tarsan.
Ugu dambeyn, Dowladda Soomaaliya ayaan weli wax jawaab ah ka bixin hadalka dowladda Kenya kasoo yeeray ee dhaliyay khilaaf siyaasadeedka soo dhex-galay labada waddan, kaasoo si aad ah loo hadal-hayo.
XUKUUMADA CUSUB EE PUNTLAND OO GUDI ADAG U XILSAARTAY XILWAREEJINTA WASAARADAHA
qayb kamid ah golaha wasiirada cusub ee Puntland, ayaa si rasmi ah ula wareegay, wasaaradihii loo magacaabay, kadib markii shalay xildhibaannada Baarlamanku ay cod-buuxa ku ansixiyeen xukuumadda cusub.
Wasiirada xilka la wareegay ayaa kala ah; wasiirka Maaliyadda Xassan Shire Abgaal, wasiirka Degaanka, Ismaaciil Diiriye Gama’diid, wasiirka Caafimaadka, Jaamac Faarax Xassan iyo wasiirka Arrimaha gudaha, Maxamed Cabdiraxmaan Dhamancad.
Dhinaca kale, madaxweynaha Puntland ayaa guddi ka kooban 4 xubnood u magacaabay arrimaha xil-wareejinta, waxaana dhammaan wasaaradaha lagu wargeliyay in ay la shaqeeyaan guddigaasi.
“Waxaa lagu wargelinayaa, dhammaan wasaaradaha Dowladda Puntland in loo xil saaray xil-wareejinta wasiiradii hore iyo wasiirada cusub guddigaasi” ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland.
Guddiga loo igmaday xil-wareejinta ayaa kala ah agaasimaha madaxtooyada, xeer ilaaliyaha guud, hanti-dhowraha guud iyo xisaabiyaha guud ee dowladda Puntland.
WAXAA SAAKA MAGAALADA MUQDISHO KA SOO DEGAY DANJIRAHA KENYA EE SOOMAALIYA
17th February 2019 by A.lahi Leave a Comment
Danjire Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan), safiirkii dowladda Soomaaliya ee Kenya ayaa goordhaweyd kasoo dagay garoonka diyaaraadaha magaaladda Muqdisho.
Diyaaradda uu la socday Taraan waxaa saarnaa Marwada Madaxweynaha Somaliya & Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliya oo xalay soo gaaray Nairobi, islamarkaana u soo gudbaayay Muqdisho.
Dowladda kenya ayaa Denjire Tarsan ku Amartay in dalkeeda isaga baxo kadib markii uu xumaaday Xiriirkii Diblumaasiyadeed ee kala dhaxeeyay Soomaaliya oo ay sheegtay in ay kusoo xad-gudubtay hantida dadka reer Kenya.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa inay jawaab ka soo saarto tallaabadii Kenya ay qaaday ee ay dalkeeda kaga soo saartay safiirkii Soomaaliya Kenya u fadhiyay.
WAA MAXAY BARNAAMIJKA SIYAASADEED EE UU MAAAGAN YAHAY MADAXWAYNE DENI
Madaxweynaha dowladda Puntland, Siciid Cabdullaahi Maxamed (Deni) ayaa daahfuray, barnaamij siyaasadeed diyaarsan oo ku saabsan, waxqabadka u qorshaysan in uu Puntland ka hirgeliyo.
Madaxweynaha ayaa barnaamijkiisa ku beegay, kulankii Baarlamanka ee lagu ansixiyay xukuumadda cusub, waxaana uu ansixinta ka hor mudanayaasha u akhriyay, khudbad uu ku soo bandhigay barnaamijkiisa waxqabad ee u qorshaysan.
Khudbaddiisa ayaa u badneyd ballan-qaadyadiisi hore ol’olaha doorashada oo ku celis ah, hase yeeshee waxaa ku jiray laba qodob oo cusub, kuwaasoo kala ahaa; miisaaniyad gaar ah oo uu sheegay in xukuumaddiisu u qoondeyn doonto, soo celinta gobolada maqan ee Sool Sanaag &Cayn iyo xoojinta awoodda ay Puntland u leedahay, gelidda heshiiyo maal-geshi oo caalami ah.
sidoo kale madaxwaynaha ayaa muujiyay rajo dardarleh oo waxkaga badali karo dowladad puntland
DOWLADA KENYA OO SHEEGTAY INAY XIRIIRKA U JARTAY SOMALIYA UNA YERATAY SAFIIRKEEDA MUQDISHO
XUKUUMADA CUSUB EE DOWLADA PUNTLAND OO MIISAANIYAD GAAR AH U BALAN QAADAY SOO CELINTA GOBOLADA MAQAN
Madaxweynaha ayaa khudbad uu ujeediyay xildhibaannada Baarlamanka ka dalbaday, in ay xasaannadda siiyaan golaha wasiirada cusub, si loo hirgeliyo ballanqaadyadiisi uu ku galay ol’olaha doorashada ee la baxay Tayeyn&Tiigsi.
Sidoo kale wuxuu ballan qaaday qodoba cusub oo ay ku jiraan, in uu xoojin doono awoodda Puntland u leedahay, gelidda heshiisyo caalami ah iyo in uu miisaanad gaar ah u samayn doono, soo celinta, difaaca iyo horumarinta gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ee Puntland.